साउथ फिल्मकी सुपरहिट नायिका काजलको हट फोटो मै जवानी देखियो , हेर्नुहोस् ‘हट फोटो सुट’ ! - Nalapani
साउथ फिल्मकी सुपरहिट नायिका काजलको हट फोटो मै जवानी देखियो , हेर्नुहोस् ‘हट फोटो सुट’ !
दक्षिण भारतीय (साउथ इण्डियन) चलचित्र हेर्ने जो-कोहीका लागि पनि सु-परिचित नाम हो- काजल अग्रवाल । साउथ फिल्म हेर्ने तर काजल अग्रवाललाई मन नपराउने दर्शक सायदै होलान् । उमेरले ३० कटिसक्दा पनि आफ्नो लोभलाग्दो अभिनय र सुन्दरताका कारण उनले अझै सबै दर्शकको मन मुटुमा राज गर्न सफल छिन् ।
उनले प्रायजसो तेल्गु चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् भने तमिल र हिन्दी चलचित्र क्षेत्रमा पनि उनको योगदान अतुलनीय रहेको छ । सन् २००४ मा आएको बलिउड चलचित्र ‘क्युं हो गया ना’ बाट उनले आफ्नो अभिनय यात्राको सुरूवात गरेकी थिइन् ।
उनका हिन्दी चलचित्रमा ‘सिंघम’, ‘स्पेशल २६’, ‘दो लफ्जो की कहानी’ सुपरहिट छन् । त्यस्तै उनले अभिनय गरेका दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘मगधिरा’, ‘थुप्पाकी’, ‘चन्दा मामा’ चर्चित छन् ।
हेर्नुहोस् फोटो फिचर :
अमिशा पटेलको हट फोटो सुट
अमिशा पटेल ९ जुन १९७६ मुम्बाइमा जन्मिएकी हुन । उनीले गिर्जाघर र जोन क्यानन स्कुलबाट पढिन । त्यसपछि अमिसा अर्थशास्त्र अध्ययन गर्न मैसाचुसेट्समा रहेको एक विश्वविद्यालयमा भर्ना भइन । पढाईमा तेज उनीले त्यहाँ स्वर्ण पदक पाईन ।
उनी बाल्यकालबाटै पढाईमा तीष्ण थिइन । उनले सुपरहिट फिल्म क्या ये ही प्यार है बाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन । उनको गदर फिल्म पनि सुपरहिट भयो । हमराज, ये है जलवा, मेरे जीवन साथी, भूल भूलैया, सेर टु लगायत फिल्ममा उनले अभिनय गरिसकेकी छिन् । उनै नायिकाले हट फोटोसुट गरेकी छिन् । यसै कारण उनी यतिखेर चर्चामा छिन् ।
← यी हुन् कहिलै प्रेममा धोका नदिने ५ राशिका युवती ! आयो रितु कोईरालाको लच्किएको कम्मर (भिडियो सहित) →